आजदेखि डा. गोविन्द केसीको अवकाश - Jagaran Post
Home/स्वास्थ्य/आजदेखि डा. गोविन्द केसीको अवकाश
आजदेखि डा. गोविन्द केसीको अवकाश
२०७६ आश्विन २७, सोमबार ११:०६ गते
२६ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत चिकित्सिक गोविन्द केसीले अवकाश पाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दै आएका केसीले अवकाश हुँदै गर्दा पनि ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
कोरोना भाईरसविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न अलिबाबाले दियो डेढ करोड डलर सहयोग
२०७६ माघ १६, बिहीबार २०:०६ गते
२०७५ माघ २१, सोमबार २०:५५ गते